गण्डकी विकास बैंकको एजीएम आज, १९.३१% बोनस प्रस्तावमा छलफल सुरु
काठमाडौं : गण्डकी विकास बैंकको साधारण सभा शुक्रबार (जेठ २५ गते) होटल पोखरा ग्रान्ड, पार्दि विरौटा पोखरामा ८.३० बजेबाट सुरु भएको छ । सभामा बैंकले १९.३१% बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पेश गरेको छ । बैंकले बोनस वितरणमा ४४ करोड ५० लाख ९२ हजार २५० रुपैयाँ खर्च गर्नेछ ।
यता, गण्डकीले २०७४ असार २० गतेसम्म कायम सेयरधनीलाई बोनस सेयरमा कर छुट दिने प्रस्ताव सभामा पेश गरेको छ । मर्ज भएका कम्पनीका सेयरधनीले निश्चित अवधिसम्म कर छुट पाउने प्रावधान छ । तर, मर्ज भइसकेपछि सेयर किनेकाले भने यस्तो छुट पाउने छैनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, वासलात, नाफा नोक्सान लगायतका एजेन्डामा पनि छलफल भइरहेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४–७५ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अर्को एजेन्डा पनि सभामा पेश भएको छ ।
संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट ३–३ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने तथा उनीहरुको भत्ता एवं सुविधा वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पनि छ । सभा प्रयोजनका लागि बैंकले जेठ ८ गतेदेखि शुक्रबारसम्म बुक क्लोज गरेको छ । जेठ ७ गतेसम्म कायम सेयरधनीले मात्र बैंकले वितरण गर्ने बोनस पाउनेछन् ।
हाल यस बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ३० करोड ४९ लाख ७ हजार ७५० रुपैयाँ छ । बोनसपछि पुँजी २ अर्ब ७५ करोड पुग्नेछ । गण्डकीले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा ३४ करोड ४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । प्रतिसेयर आम्दानी १९ रुपैयाँ ६९ पैसा (वार्षिक) रहेको यस बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १५६ रुपैयाँ ३३ पैसा छ ।
सिटिजन्स बैंकले गर्यो भारतको एक्सिस बैंकसँग रेमिट्यान्स सम्झौता
प्रोग्रेसिभको फेरि आउने भयो १३ लाख ३० हजार कित्ता सेयर लिलामी, कहिलेसम्म हुनेछ म्याद ?
गुडविलको ५.२६३% नगद पारित गर्न फागुन १० मा एजीएम, बुक क्लोज कहिले ?
नयाँ नेपालले लिलामीमा सेयर नपाउनेलाई आजदेखि पैसा फिर्ता गर्दै